Warbixin talaalkii shuban biyoodka ee magalaada Kismaayo.
by Editor · March 27th, 2017
XOGTA TALAALKII SHUBAN BIYOODKA EE MAGAALADA KISMAAYO
Waxaa kabilowday magaalada Kismaayo sadex xafadood oo kamida talaalka kahortaga shuban biyoodka iyo daacuun calooledka tarikhdu markay ahayd 16/03/2017
Xafadahasoo kala ahaa Farjano, Fanoole iyo Calanley. Talalka oo socday mudo shan bari aha ayaa kusoo gabagaboobay si habsamileh oo wafaqasan siddi loogu tala galay.
Sababaha kadanbeyey in la bilaabo talalkan ayaa ahaa kadib marki magalada kismaayo iyo guud ahaan dalka uu kadilaacay xanuunka shubanka ayaa waxaan sameynay badhitaan aan udiray shaybaadhka dalka ee caasimada Muqdisho. Waxaan baadhitaan saxaro ka qaadnay 8 qof oo xanuunku haleelay kuwaa soo dhamaantood noqdeen positive.
Kadib waxaan badhitaan kusameynay goobaha uu kubadanyahay xanuunkani Kismaayo ahaan waxaan ogaanay iney u badan yihiin xaafadaha Farjano, Fanole iyo Calanley.
Kadib codsi ayaan udirsanay hay’adaha qaramada midoobay iney naga caawiyaan talalka in laga qabto guud ahaan dalka. Nasiib wanaag waxey nooshegen iney naga cawin karaan kali aha melaha uu u badanyahay xanuunku sababo la xadhiidha in aan hada kahor laga qabanin talaal noocan ah dalka Somalia iyo dhaqaale ahaanba.
Kadib waxaan nasiib u helnay in laga qabto talaalka 7 gobood oo kamid dalka waxan u batay warbixinta magaalada Kismaayo, Beledwayne iyo qaybo kamida Gobolka Banaadir. kadib waxaa la qorsheyey in laga qabto sadex xafadadood oo Kismaayo ah, labo xafadood oo Beledwayne ah iyo labo dagmo oo kamida Gobolka Banaadir sida dagmada Hodan iyo dagmada Dharkaynley.
Kadib tariikhdu markey ahayd 14/03/2017 waxaan bilownay inan tababaro dadkii qaban lahaa talaalka, Tababar kaas oo socday mudo labo bari ah.
15/03/2017 waxaan xaflad daahfurida talaalka ku qabanay magalaada Kismaayo, waxaana daahfuray talaalka ugu horeyna qaatay Madaxweyne ku-xigeenka labaad Mudane Suldan Abdiqadir Lugadheere iyo wasiir ku-xigeenka wasaarada caafimaadka mudane Dr Ali Nuur . waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay Wasiiro kala duwan sida Wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Macalim Maxamed, Wasiirka wasaaraada Haweenka iyo Arimaha Qoyska Marwo Qamar,Wasiirka Beeraha iyo khayraddka Mudane Geele iyo wasiiro kaloo badan kuwaa soo talaalka halkaas ku qaatay.
Dadka ku nool sadex daas xaafadood ayaa lagu qiyaasay 165,094 oo qof ayagoo u kala qeybasan
Xaafada Farjano 75,660
Xaafada Calanley 45,784
Xaafada Fanoole 43, 650
Waxaa ka shaqo galay sadex daa xaafadood 94 kooxood oo koox kasta ay ka koobanyihiin 4 qof, Waxaana gaadhnay inaan talaalno 98.2% tirade guud ee sadexda xaafadood, iyada oo ay jiraan dad farabadan oo diiday talaalka sababo laxadhiida talaalkan oo ku cusub dalka iyo dadka oo an hore ugu baranin in laga talaalo xanuunkan.